'Belidle amankwebevu' iphoyisa likhipha isidumbu - Ilanga News
Home Izindaba ‘Belidle amankwebevu’ iphoyisa likhipha isidumbu
‘Belidle amankwebevu’ iphoyisa likhipha isidumbu
Kuthiwa lifike livele lisiphethe ngesandla isibhamu
KUSOLAKALA ukuthi belibudlonyile iphoyisa laseKhombe, eNkandla, okubikwa ukuthi lidubule labulala owesilisa emuva kokuba likhahlele utshwala abebuphuza nezinye izinsizwa ngoMsombuluko. Leli phoyisa okuthiwa lidubule labulala uMnu Mqaphe Ntuli (24) (osesithombeni) ngesibhamu somsebenzi, KwaMthabeni, khona eNkandla, kubikwa ukuthi lifike endaweni yokucima ukoma obekuhleli kuyona uMnu Ntuli nezinye izinsizwa, bezibusisa ngezibandayo, laxakazisana nomunye wesilisa.
Ngokusho kwabebekhona kusuka uthuthuva, bathi leli phoyisa kukhona ebelimfuna kwase kuphambana imibono phakathi kwalo noMnu Ntuli, obekhuza ingxabano yalo nalona wesilisa.
“Kuthe uma lingamtholi lona ebelimfuna, lachitha utshwala, obebuphuzwa nguMqaphe nabanye abafana. UMqaphe ubuzile ukuthi libuchithelani utshwala lathi makathule ngoba uzofela ubala,” kusho umthombo. Uthi kusabangwa lokho, iphoyisa livele langabe lisaqhubeka nenkulumo, ladubula uMnu Ntuli amahlandla amabili esifubeni, washonela khona lapho. Isibhamu kuthiwa lifike kule ndawo yokucima ukoma livele lisiphethe
ngesandla. UMnu Sphamandla Ntuli, ongumfowabo kamufi, uthi namanje basethukile ngokwenziwe yileli phoyisa aligagule ngesibongo. Uthi izigameko ezifana nalezi sezijwayelekile esiteshini samaphoyisa aseKhombe.
“Noma ngabe kuthiwa ubesebhede kanjani umfowethu, kodwa bekungamele lize limbulale.
“ngabe kungcono ukuba sikhuluma ukuthi limshaye ngenduku. Amaphoyisa kufanele ngabe yiwona asivikelayo, kodwa sekwaphenduka kwaba yiwona ayingozi emphakathini,” kusho uMnu Ntuli.
Uthi naye ufike endaweni yesigameko selidume ladlula. Elinye iphoyisa elisebenza kulesi siteshi, litshele ILANGA ukuthi konke lokhu kwenzeke ngenxa yamankwebevu, lithi uzakwabo ubekhothile.
“Lo muntu uwenza kahle umsebenzi, lokhu kusethusile sonke,” kusho leli phoyisa. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, usiqinisekisile isigameko sokudutshulwa kukaMnu Ntuli ngumuntu ongaziwa. Uthi icala livulwe eKhombe, idokodo ladluliselwa kwi-IPID ukuba liyophenywa.
Kuzokhumbuleka ukuthi kusona lesi siteshi nyakenye, elinye iphoyisa ladubula labulala umphathi walo ngaphakathi esiteshini kubangwa ukuthi umphathi ulibhadame lizijabulisa ndawana thile ekubeni lalithe kaliyi emsebenzini ngoba kaliphilile.
Previous articleUsungulelwe isikhwama sokwakhelwa umuzi umfundi
Next articlei-iron duke icacisa ngo-lorch norhulani